कप्तान भरतमाथि रंगभेदी टिप्पणीको आरोप ! | Hamro Khelkud
कप्तान भरतमाथि रंगभेदी टिप्पणीको आरोप !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – प्रभु जावलाखेल युथ क्लबका विदेशी खेलाडी ड्याडी जुनियर वाम्बाले त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान भरत खवासले आफुलाई रंगभेदी टिप्पणी गरेको आरोप लागेको छ । कतार एयरवेज सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका दौरान मंगलबार को खेलका दौरान भारतले गाली गरेको उनको आरोप छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको एस्ट्रो ट्रफमा मंगलबार भएको निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भरतकै एक मात्र गोलमा आर्मी १–० ले विजयी भएको थियो । पहिलो हाफको अन्त्यतिर भरतले जावलाखेलका डिफेन्डर एडमा डोम्बियालाई फउल गर्न पुगेका थए ।
लगत्तै विवादको अवस्था सिर्जना हुदा भरतले वाम्बालाई मङ्की (बादर) भनेको दाबी गरे । त्यसपछि खेल केही बेर बिथोलिएको थियो । त्यसपछ वाम्बाले खेल बहिस्कार गर्न खोज्दा जावलाखेलका पदाधिकारीहरुले सम्झाउदै थपिएको समयमा उनी खेल्न राजी भएको थिए ।
जावलाखेलका प्रशिक्षक नरेश थापाले पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीले यस्तो व्यवहार गर्नु नराम्रो भएको बताए । ‘राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीले मैदानमा बराम्बार मुख छाडेको सुनेको थिए । रेफ्री पनि त्यही थियो । हामीले सुन्ने रेफ्रीले नसुन्ने भन्ने हुन्छ ? फोर्थ अफिसियलसँग कुरा गर्दा हामीले पनि सुन्नुपर्छ । हामीले सुनेको भए कार्ड भइहाल्छ भन्ने जवाफबाट पन्छिन खोज्दछ ।’
खेलपछि प्रशिक्षक थापाले भने, ‘म्याचमा रेफ्रीको डिसिजन नै अन्तिम हुन्छ । म्याचभित्र हामीले केही गर्न गर्न र भन्न सक्दैनौं । हामीले यसबारे सम्बन्धित निकायमा आजको घट्नाबारे रिपोर्ट दिन क्लबको निर्णय भइसकेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पनि रंगभेदी हिसाबमा मङ्की शब्द दोहोरिदै आएको छ । नेपाली खेलकुदमा रंगभेदटको घट्ना बाहिर आएको सम्भवत् यो नै पहिलोपटक हो ।
ए डिभिजन लिग डाइरेक्टर सन्जिव मिश्रले यो रंगभेदी दुव्र्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पनि रहेको र यो घट्नाको छानबिन गर्दै दोषी ठहरिए कारवाही हुने बताएका छन् । ‘कुन खेलाडीले कसलाई यस्तो भनेको हो । हामी भिडियो फुटेज हेरेर छानबिन गर्नेछौं । दोषी ठहरिए कारवाही अवश्य हुनेछ । यस विषयमा हामीसँग कोर्ड अफ कन्डक्ट छैन । तर, पनि हामी फिफाको नियममा रहेर दोषीमाथि कारवाही गर्नेछौं । दोषी ठहरिए दोषी उम्कने छैन ।’